(7) - BookCubicle
အပိုငျး - ၇ : မငျးငါ့အတှကျငိုလို့မနာတော့ဘူး။
ယှနျးခြီလှယျအိတျကွိုးလေးကိုတငျးတငျးဆှဲမိတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကိုသူ မတှရေဲ့ရငျတောငျ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ဆီအတငျးရောကျလာတာပဲ။ ဆိုငျကယျဦးထုပျကမျးပေးတဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို ယှနျးခြီ မကျြလုံးလေးပငျ့ပွီး မဝံ့မရဲကွညျ့ပွနျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ပုံစံက အရငျအတိုငျး ခပျတညျတညျပါပဲ။ ဒါဆို ညက ခနျ့ဝသေျောပွောလိုကျတဲ့ စကားက အတညျရောဟုတျရဲ့လား။ ယှနျးခြီဘာကိုယုံရမလဲမသိတော့ဘူး။ သူ ငွိမျငွိမျလေးပဲ ခနျ့ဝသေျောကမျးပေးတဲ့ ဆိုငျကယျဦးထုပျလေးကို လှမျးယူလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ သူ့လကျတှကေ မတျောတဆ ထိသှားမိသေးတယျ။ ကဈြ သူ မထိမိသှားအောငျ သတိထားနပေါတယျဆိုကာမှ!
“အငျး… သှား… သှားရအောငျလေ…”
ယှနျးခြီမကျြနှာရဲရဲလေးနဲ့ ခနျ့ဝသေျောကိုလှမျးပွောတယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ ခေါငျးကိုပဲညိတျပွီး အရှဘေ့ကျကို ပွနျလှညျ့သှားလရေဲ့။ ဆိုငျကယျနောကျကိုထိုငျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ပွဿနာတဈခုပျေါလာပွနျတယျ။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ သူ့လကျကို ဘယျမှာထားရမလဲ ယှနျးခြီမသိတော့ဘူး။
အရငျတုနျးက… အရငျတုနျးကတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ခါးကို ဖကျရငျဖကျ၊ အေးတဲ့အခါမြိုးတှဆေိုရငျ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ဂြာကငျအိတျကပျထဲကို သူ့လကျကိုထညျ့ထားတတျတယျ။ လကျအိတျဝတျထားတာပဲ သူ အရမျးကွီးစဉျးစားစရာမလိုပါဘူး။ သူ့လကျကို ဘယျနားမှာထားရမလဲဆိုတာကို အကအြနစဉျးစားနတေုနျးမှာပဲ ခနျ့ဝသေျောက ဆိုငျကယျကို စကျနှိုးပွီးဆောငျ့ထှကျလိုကျတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့လကျတှကေ အသားကစြှာနဲ့ပဲ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ခါးတှဆေီကို ရောကျသှားတော့တာပေ့ါ။ အကငျြ့ဆိုတာကွီးက တဈခါခါမှာကွောကျဖို့သိပျကောငျးတယျလေ။
ယှနျးခြီသူ့လကျကို မရုတျဖွဈဘူး။ မကျြနှာပွောငျတိုကျပွီးပဲ သူ ဆကျကိုငျထားလိုကျတယျ။ တကယျလို့ သူ ရုတျသှားမှ ခနျ့ဝသေျောက ဘာလို့လဲမေးရငျ သူ့မှာဖွစေရာအဖွမေရှိဘူးလေ။ ဟငျ့အငျး ဖွစေရာအဖွထေကျ အမှနျကိုဝနျခံရရငျ စကားမှားသှားမှာကို သူ ကွောကျတာပါ။ ဟုတျတယျ… ခနျ့ဝသေျောကို စကားတှမှေားဖွမေိမှာကို သူ ကွောကျတယျ။
အရှကေ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ နှုတျခမျးတှကေတော့ ကော့ညှတျနခေဲ့တယျ။ အရငျတုနျးကလညျး ယှနျးခြီသူ့ကို ဖကျထားတတျတာပါပဲ။ အခုကသူ့ကိုပိုနှေးစပွေီးတော့ သူ့စိတျကိုပိုပွီး ကွညျလငျစတေယျ။ ဒီခံစားခကျြက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဆောငျးတှငျးကွီးမှာ ခှေးသားပေါကျလေးတဈကောငျက နှေးထှေးတဲ့အိပျယာထဲမှာ မိခငျနို့သောကျရငျး နို့ကိုကျပွီးအိပျနရေတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးပဲ။ နှေးနှေးထှေးထှေးနဲ့သကျတောငျ့သကျသာရှိပွီး စိတျကနြေပျစရာကောငျးလှနျးလှတယျ။
သူတို့ကြောငျးရောကျခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးခြီကို စကားပွောမလို့ ပွငျတုနျးရှိသေးတယျ။ သူ့သူငယျခငျြးတှအေရငျရောကျလာခဲ့တယျ။ ယှနျးခြီကတော့ လူဆိုးလေးတှေ အုပျစုကိုတောငျ့သှားတာလညျးမွငျရော မွခှေေးသိုကျထဲကနလှေတျအောငျပွေးတဲ့ ယုနျလေးတဈကောငျလို လုံးနအေောငျပွေးသှားခဲ့တာပေါ့။
တျောသေးတယျ… အဲ့ဒီကောငျတှသော မရောကျလာဘူးဆိုရငျ ငါတော့ဒုက်ခပဲ… ခနျ့ဝသေျောကို ငါ ဘယျလိုလုပျပွီး စကားပွောရမှာလဲ။
သူ့မှာ ခနျ့ဝသေျောကို ရငျဆိုငျရဲတဲ့ သတ်တိလညျးမရှိဘူးလေ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ သူ့သူငယျခငျြးကောငျတှကေိုပဲ အမုနျးအပွညျ့နဲ့မကျြလုံးကွီးနဲ့ ကွညျ့လိုကျတယျ။ သူနဲ့ယှနျးခြီရဲ့ သာယာတဲ့ရကျလေးကို ဒီကောငျတှကေ ဘာလို့ဖကျြဆီးရတာလဲ။ အကွောငျးပွခကျြကောငျးကောငျးသာမရှိဘူးဆိုရငျ သူ ဒီကောငျတှကေို ထိုးကွိတျပဈလိုကျဦးမယျ။ ဘာအကွောငျးနဲ့ပဲ သူလုပျလုပျ လူဆိုးလေးဖွဈနပွေီးသားပဲဟာ မကောငျးတာလေး လုပျလိုကျလညျး သူ ထူးပွီးဖွဈသှားစရာမရှိပါဘူး။ လူဆိုးတှကေ လူဆိုးအလုပျလုပျတာကို ဘယျသူက ဘာပွောရဲမှာလဲ။
အမွှာနှဈကောငျက ခေါငျးယမျးပွတယျ။ အမွှာတဈယောကျပွောထားတာကို နောကျတဈယောကျက ထပျဖွညျ့ပွောလိုကျသေးတယျ။
သူတို့ရဲ့အကွညျ့တှကေ ကောငျလေးတဈယောကျဆီရောကျသှားလရေဲ့။ အဲ့ကောငျလေးကတော့ ခေါငျးရောငျးလိုကျတဲ့ သူငယျခငျြးတဈစုကို မုနျးတီးတဲ့အကွညျ့ကွီးတှနေဲ့အရငျကွညျ့တယျ။ ပွီးတော့ခနျ့ဝသေျောကိုကွညျ့ပွီး…
“ဟိုကောငျရဲ့ အဈကိုက မငျးကို ပွဿနာရှာခငျြနတေယျ…”
မိနျးကလေးတှလေိုပဲ ဘာလညောလဆေိုရငျ တနျးသိသလိုပဲ ယောကျြားလေးတှမှောလညျး သူတို့ရဲ့အခြိနျးအခကျြနဲ့ သူတို့ရှိပုံတော့ရတယျ။ ဟိုကောငျဆိုတာနဲ့ ဘယျသူ့ကိုပွောတာလဲဆိုတာ ခနျ့ဝသေျော တနျးသိသှားတယျ။ သူ ခေါငျးညိတျပွီးတော့…
“အငျး ငါ သိပွီ…”
“အဲ့ဒါကို မငျး ဘယျလိုလုပျခငျြလဲ…”
အဲ့ဒီကောငျရဲ့… အဲ အဲ့ဒီကောငျဆိုတာ ခနျ့ဝသေျောတဈခါ အရောငျမကွိုကျလို့ဆိုပွီးထိုးလိုကျတဲ့ ကောငျလေးရဲ့အဈကိုပါ။ အဲ့ဒီကောငျရဲ့ အဈကိုက ကောငျးကောငျးကနျးကနျးမဟုတျတဲ့အပွငျ ရနျဖွဈရငျလညျး အောကျတနျးကတြဲ့ နညျးလမျးတှလေညျး ရနျဖွဈတတျသေးတယျ။ တဈယောကျခငျြးထိုးမယျဆိုပွီး အုပျစုလိုကျရိုကျတာတို့ လကျနကျတှသေယျလာတာမြိုးပေါ့။
သွျော! အဲ့လိုဖွဈလို့ရှိဖူးသေးတယျ။ တဈခါက ခနျ့ဝသေျော အဲ့လိုကောငျတှနေဲ့ရနျဖွဈဖူးတယျ။ ဓားယူလာတာက တဈဖကျသူတှပေါပဲ။ သူတို့အခငျြးခငျြးထိုးမိကွပွီး ခနျ့ဝသေျောက လကျလှနျတယျလို့ဖွဈသှားသေးတယျ။ ခနျ့ဝသေျောဆိုတဲ့ ကွကျမောကျသီးလေးက ဘယျတော့မှ သူမြားကို နာကငျြစမေဲ့ လကျနကျကိုမကိုငျဆောငျတတျပါဘူး။ ဓားနဲ့ခုတျဖူးတာဆိုလို့ သနေတေဲ့ကွကျသားတှကေိုပဲ အဒျေါကို ဟငျးကူကိုငျပေးလို့ ခုတျဖူးခဲ့တာ။ အဲ့လောကျထိ ရိုးသားတဲ့ကောငျလေးပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး ခနျ့ဝသေျောက လကျလှနျတယျလို့ပဲ သတငျးထှကျခဲ့တယျ။ တောငျစောငျးပျေါကနေ လကျလှနျသမြှတှကေို ပဈခတြယျဆိုတာကတော့ ဘယျကလကေဝက လှငျ့လိုကျတဲ့သတငျးလဲတော့ မသိပါဘူး။
ဒါပမေဲ့လညျး သိတယျမဟုတျလား လူတှကေ အမှနျတှကေို သိပျစိတျမဝငျစားတတျကွဘူးလေ။ သူတို့က နားထောငျလို့ကောငျးတဲ့ သတငျးတှလေောကျပဲ စိတျဝငျစားကွတယျ။
ခနျ့ဝသေျောကတော့ နားထောငျကောငျးတဲ့ကောလဟလတှရေော၊ နားခါးတဲ့အမှနျသတငျးတှကေိုရော သိပျတော့ စိတျမဝငျစားပါဘူး။ မကွားခငျြယောငျပဲဆောငျထားလိုကျတယျ။ အဲ့ဒါကလညျး သူ့ကိုနားအေးစတေဲ့အကွောငျးတှထေဲက တဈခုဖွဈတယျလေ။
လှယျအိတျကိုလကျတဈဖကျနဲ့နောကျပဈကိုငျပွီး အတနျးဘကျကိုသှားဖို့ ခနျ့ဝသေျော ခွစေလှမျးတယျ။ ယှနျးခြီကို တှခေ့ငျြလှပွီ။ ယှနျးခြီနဲ့သူ စကားတှပွေောစရာရှိတယျ။
“မငျးသူ့ကိုဘာမှမလုပျဘဲပဈထားရငျ သူက ယှနျးခြီကိုရနျရှာရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ…”
တှေးဆဆနဲ့ပွောတဲ့အမွှာနှဈကောငျထဲက တဈကောငျရဲ့အသံထှကျလာတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျောခွလှေမျးတှရေပျသှားတယျ။ အနောကျကို ပွနျလှညျ့ကွတဲ့သူ့အကွညျ့တှထေဲမှာ င့ါကိုရနျစနတောလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှပေါနလေရေဲ့။
စကားစတဲ့အမွှာကောငျလေးက ပခုံးလေးအသာတှနျ့ပွီး ခနျ့ဝသေျောကိုကွညျ့တယျ။ သူ့မကျြနှာမှာ ဂဈြတဈတဈနဲ့ ခနျ့ဝသေျောကို ကလိလိုကျရတဲ့အတှကျကနြေပျရိပျတှရှေိနခေဲ့တယျ။ ထငျတဲ့အတိုငျးပဲ ခနျ့ဝသေျောက ဒီအုနျးမုတျခှကျလေးနဲ့ ပတျသကျလာရငျ လှုပျလှုပျခတျခတျဖွဈတာပဲ။ ဒါကသိပျကိုစိတျဝငျစားစရာကောငျးတယျ။ သူတို့အုပျစုထဲမှာ အမွှာကောငျလေးတှကေ ဉာဏျနီဉာဏျနကျမြားတဲ့ကောငျကလေးတှလေို့ ပွောလို့ရတယျလေ။
“အဲ့လိုကောငျတှကေ စိတျဓာတျမကောငျးတာကို မငျးလညျးသိပါတယျ…”
နောကျထပျအမွှာတဈယောကျက ထပျပွီးလောငျစာထညျ့တယျ။ ကောငျလေးနှဈယောကျကွိုကျတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ သူတို့စိတျထဲဘာခံစားခကျြမှမရှိဘူး။ ရှံမုနျးတယျ၊ ကနြေပျတယျ၊ ထောကျခံတယျ၊ အစရှိတဲ့ခံစားခကျြတှေ သူတို့ဘာတဈခုမှ မရှိဘူး။ ခံစားခကျြနဲ့နညျးနညျးတူတာလို့ ပွောရမယျဆိုရငျ သူတို့စိတျဝငျစားတယျ။ ကောငျလေးနှဈယောကျကွိုကျကွတာက သိပျထူးဆနျးတဲ့ ကိစ်စတဈခုတော့လညျး မဟုတျပါဘူး။ ရှိတော့ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ပတျဝနျးကငျြမှာ မရှိဖူးသေးဘူး။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အမူအရာတှကေို တခွားနားလပိနျးတုံးကောငျတှသော မသိရှိမယျ။ သူတို့အမွှာနှဈကောငျက ပါးတာမှလှပျနတောမို့ ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျတယျ။
“မငျးအခုတလော အဲ့ဒီအုနျးမှုတျခှကျလေးနဲ့ ပေါငျးနတောကို သူတို့မသိဘဲဘယျနပေါ့မလဲ…”
ကနျြတဲ့ကောငျတှကေ ဘာလို့အဲ့ဒီအုနျးမှုတျခှကျက သူတို့ကွားထဲရောကျလာလဲကို မသိဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး အဓိကက သူတို့ကို ရနျစလာမဲ့ကောငျကို ရှငျးထုတျရရငျပွီးရောမို့ အမွှာနှဈကောငျကို သူတို့လှတျပေးလိုကျတယျ။ အဲ့နှဈကောငျက သူမြားတှကေို သှေးဆောငျတဲ့နရောမှာ ထိပျတနျးပဲလေ။ သူတို့က ရနျဖွဈတာနဲ့တဈဖကျသားကိုပွဿနာရှာတဲ့နရောမှာ သိပျတျောကွတယျ။ စကားလုံးတှနေဲ့။
“အငျးလေ… မငျးလညျးသိနတောပဲ ရနျဖွဈရငျ ဘယျသူဘယျဝါရယျဆိုပွီး ခှဲခွားမနဘေူး…”
“ကိုယျအမွငျကပျတဲ့ကောငျရဲ့ အားနညျးခကျြကို လုပျလိုကျရုံပဲ… ဒါဆို အဲ့ကောငျကို အကွိုကျရိုကျလို့ရပွီလေ…”
တဈယောကျတဈပေါကျ အတိုငျအဖောကျညီညီနဲ့ ပွောနကွေတဲ့အမွှာနှဈကောငျကို အုပျစုထဲက ကနျြတဲ့ကောငျတှကေ နားမလညျစှာကွညျ့ကွတယျ။ အားနညျးခကျြ? ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောရဲ့အားနညျးခကျြလား? ဘာလို့လဲ?
ကြောပိုးအိတျကွိုးကို တငျးတငျးဆုတျကိုငျထားတဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ပုံစံအရ သူ့စိတျတှယေိုငျလာပွီဆိုတာ သူတို့သိတယျ။ အမွှာလူဆိုးလေးနှဈယောကျက တဈယောကျကိုတဈယောကျ မကျြစပဈပွလိုကျပွီး ခနျ့ဝသေျောဆီ ပွိုငျတူသှားလိုကျကွတယျ။ သူတို့ခနျ့ဝသေျောရဲ့တဈဖကျတဈခကျြမှာရပျပွီး ခနျ့ဝသေျော ပခုံးကိုဖကျတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့သုံးယောကျပဲ ကွားနိုငျလောကျတဲ့အထိ အသံကိုနှိမျ့ပွီး…
“ယှနျးခြီကို သူတို့ Target ထားနိုငျတယျလေ…”
တဈယောကျပွောပွီးနောကျမှာ နောကျတဈယောကျက ဆကျပွောလာတယျ။
“ငါတို့ရနျဖွဈတုနျးကလညျး အဲ့လိုပဲ လုပျခဲ့တာမဟုတျလား…”
အတနျးဘကျကိုဦးတညျဖို့လှညျ့ထားတဲ့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ခွလှေမျးတှကေ အနောကျကိုပွနျလှညျ့သှားတယျ။ ဆိုငျကယျဆီကို ခွလှေမျးကြဲတှနေဲ့လြှောကျသှားတဲ့ ခနျ့ဝသေျောကိုကွညျ့ပွီး အမွှာလူဆိုးလေးနှဈကောငျက တဈယောကျလကျကို တဈယောကျရိုကျလိုကျကွတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ စိတျမရှညျတဲ့အျောသံကို သူတို့ကွားလိုကျရတယျ။
အမွှာနှဈကောငျ ကကြေနြေပျနပျပဲ တဈယောကျကိုတဈယောကျကွညျ့ပွီး လကျဝါးခငျြးရိုကျလိုကျကွတယျ။ နောကျတော့ လူဆိုးလေးတဈအုပျစုက ဆိုငျကယျတှနေဲ့ကြောငျးထဲက ထှကျသှားခဲ့ကွတာပေါ့။
အတနျးထဲမှာတော့ ကောငျလေးတဈယောကျက ငွိမျငွိမျလေးထိုငျနခေဲ့ပါတယျ။ သူ အနောကျကိုလှညျ့မကွညျ့ရဲဘူး။ တကယျလို့ လူဆိုးလေးတဈယောကျ အတနျးထဲဝငျလာရငျ ဘယျလိုလုပျပွီး ရငျဆိုငျရမလဲဆိုတာကို သူ မသိဘူးလေ။ ဒါပမေဲ့ သူ စိတျပူတာတှကေ ဖွဈမလာခဲ့ပါဘူး။ အတနျးတကျခေါငျးလောငျးသာ ထိုးသှားခဲ့တယျ။ ကွကျမောကျသီးလေးတဈလုံးဟာ အတနျးထဲကို ဝငျမလာခဲ့ဘူး။
နံနကျခငျးအတနျးခြိနျတှကေုနျသှားတဲ့အခါမှာတော့ အုနျးမုတျခှကျလေးတဈလုံးက အနောကျကို လှညျ့ကွညျ့တယျ။ ကွကျမောကျသီးလေးတဈလုံးရဲ့နရောက လှတျနဆေဲပါပဲ။ တကယျပဲ သူ အတနျးကို မလာခဲ့ဘူး။ နလေ့ညျတိုငျးအတူ နလေ့ညျစာစားနတေဲ့လူတဈယောကျမရှိတာက ယှနျးခြီကို အောငျ့သကျသကျခံစားစတေယျ။ စိတျထဲမှာလညျး သူ့ကို ခနျ့ဝသေျောက မုနျးသှားပွီလားဆိုပွီး သူ တှေးနမေိတယျ။ ဒီအတှေးက သူ့ကို ခြောကျနကျနကျထဲကို တှနျးခလြိုကျသလိုပဲ။ ဘယျမွကျပငျကို သူ ဆှဲထားရမှနျးမသိဘူး။
“ယှနျးခြီ! ငါတို့နဲ့အတူစားမလား ဟိုကောငျလညျး မလာဘူးဆိုတော့…”
အတနျးထဲက ကောငျမလေးတှစေကားကွောငျ့ ယှနျးခြီ စိတျညဈခငျြခငျြဖွဈနရောကနေ ဖဈြညှဈပွုံးပွတယျ။ ကောငျမလေးတှကေ မကျြလုံးလေးတှမှေေးစငျးကွညျ့ကွပွီး သူ့ဆီကို အုံလာကွတာပေါ့။
“မှနျမှနျပွောစမျး နငျတို့ တဈခုခုဖွဈထားကွတယျမဟုတျလား…”
မိနျးကလေးပွောတဲ့ တဈခုခုဆိုတာ ယှနျးခြီမကျြနှာရဲသှားမဲ့ တဈခုခုကို ပွောတာပါ။
ဘာလို့ သူ့အငွငျးစကားက ရုပျရှငျထဲက မငျးသမီးတှကေ သူတို့သူငယျခငျြးတှေ ရညျးစားပူမိနတောလဲ မေးရငျ ပွနျဖွတေဲ့ပုံမြိုးဖွဈနတောလဲလို့ ယှနျးခြီ မအီမသာတှေးတယျ။
“မသိပါဘူး နငျတို့တှဲနရေငျးနဲ့ ရနျဖွဈကွတယျထငျလို့…”
ကောငျမလေးတဈယောကျ စကားကွောငျ့ ယှနျးခြီမကျြလုံးပွူးပွူးလေးနဲ့ကွညျ့တယျ။ သူနဲ့ခနျ့ဝသေျောက ဘာဖွဈတယျ?!
“ဘာလဲ ငါပွောတာ မှားလို့လား…”
ပွောတဲ့ကောငျမလေးက သူ့ရဲ့တခွားသူငယျခငျြးကောငျမလေးတှကေို ပွနျကွညျ့မေးငေါ့တယျ။ သူမပွောတာက မှားမြားမှားနလေို့လားပေါ့။
“ငါတို့… မ. မတှဲပါဘူး…”
“အိုး… ဒါဆို သူ နငျ့ကို ဖှငျ့ပွောထားတာလား…”
ယှနျးခြီငွိမျကသြှားတယျ။ သူ့ကို ခနျ့ဝသေျောက ဖှငျ့ပွောလား။ ရုတျတရကျ တဈကိုယျလုံးက သှေးတှကေ သူ့ခေါငျးကို ဆောငျ့တကျလာသလို။ အခုခြိနျမှာ သူ့ခေါငျးပျေါကို ဒယျအိုးတဈလုံးတငျပွီး ကွကျဥပွုတျရငျတောငျ ပွုတျလို့ရလောကျတယျ။ သူ ခေါငျးအတျောပူထှကျသှားလို့။
ယှနျးခြီရဲ့ငွိမျကသြှားတဲ့ပုံစံလေးကွောငျ့ ကောငျမလေးတဈအုပျက ခပျတိုးတိုးရယျကွတယျ။ သူတို့က ယှနျးခြီကို သမီးရတနာလေးကို ကွညျ့နကွေတဲ့ မိဘတှပေုံစံမြိုးနဲ့ လကျပိုကျကွညျ့လိုကျကွရငျး…
“အဲ့ တိုကျကွကျဖကောငျလေးက မဆိုးပါဘူး…”
သူတို့မွို့မှာရနျဖွဈတိုငျး ဘေးလူတှကေို အတငျးဆှဲထညျ့တဲ့ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ကောငျမလေးတှကေ ပွောနကွေတာပါ။
“နောကျပွီး နငျက တအားငွိမျလှနျးပွီး သူက တအားကို ရနျမြားလှနျးတယျ…”
ကောငျမလေးတှကေ သူတို့ပွောခငျြတာတှအေကုနျပွောပွီးတော့ စိတျဓာတျကနြတေဲ့မှိုပှငျ့လေးလို ဖွဈနတေဲ့ ယှနျးခြီကို ကွညျ့ပွီး ခပျပွုံးပွုံးနဲ့…
“ဘာအရေးလဲ နငျတို့အခငျြးခငျြး သဘောကရြငျပွီးတာပဲဟာ…”
ယှနျးခြီဘာပွောရမှနျးမသိဘဲ သူတို့ကိုကွညျ့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောကို သူ သဘောကရြငျ ဒီသူငယျခငျြးမတှကေ သူ့ကို ဘယျလိုမွငျမလဲလို့ ယှနျးခြီကွောကျတာတော့အမှနျပဲ။ ဒါပမေဲ့ လူငယျတှကေ သူထငျထားတာထကျ သဘောထားပှငျ့လငျးကွပုံရပါတယျ။ သူတို့က ယှနျးခြီကို ထောကျခံကွတယျ။ အာ… ထောကျခံတယျဆိုလို့ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ခဈြတယျလို့ပွောထားတာလဲ မဟုတျပါဘူး။
ယှနျးခြီစိတျဓာတျကခြငျြသှားတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက သူနဲ့တှဲမယျဆိုရငျ ယှနျးခြီက ယှနျးဆိုတာကို မပွောဘူးလို့ပဲ ပွောခဲ့တာပါ။ ဒါက သူ့ကိုခဈြတယျလို့ပွောတာ မဟုတျဘူးလေ ဟုတျတယျမလား။
ယှနျးခြီထပျပွီး စိတျဓာတျကသြှားပွနျတယျ။ သူ ဘယျလိုလုပျရငျ ကောငျးမလဲ။
စိတျဓာတျကတြဲ့အုနျးမှုတျခှကျလေးလုပျနရေငျးကနေ ကောငျလေးတဈယောကျက အတနျးထဲကို အပွေးအလှားဝငျလာခဲ့တယျ။ သူတို့ကြောငျးလေးက အရမျးကွီးမသေးတာကွောငျ့ ကိစ်စတဈခုခုဆို တဈကြောငျးလုံး အသိမွနျကွတယျလေ။
“ဟေ့! ဟေ့! ခနျ့ဝသေျောတုိ့ အုပျစု ရနျသှားဖွဈပွီး ပွနျလာကွတယျ!”
“သူတို့ စုတျပွတျသတျပွီး ပွနျလာတာ!”
အျောပွောနတေဲ့အသံက ယှနျးခြီရဲ့ ရငျဘတျတဈခုလုံးကို တငျးကွပျသှားစတေယျ။ သူ စိုးလညျးရိမျသှားတယျ။ ရနျဖွဈပွီး ပွနျလာကတညျးက သူတို့နိုငျလို့ပဲနမှောပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး သူ စိုးရိမျသှားတာကိုတော့ ရပျတနျ့လို့မရတာအမှနျပဲ။ အတနျးပွတငျးပေါကျကို သူ ပွေးကွညျ့တယျ။ အတနျးပွတငျးပေါကျက ဆိုငျကယျတှထေားတဲ့ နရောနဲ့နီးတယျလေ။ သူ ငုံ့အကွညျ့ အပျေါကို မော့ကွညျ့လာတဲ့ ခနျ့ဝသေျောနဲ့ အကွညျ့ခငျြးဆုံသှားတော့တာပေါ့။
သူ့နှလုံးသားကို တဈယောကျယောကျက လကျအားအပွညျ့နဲ့ဆှဲညှဈလိုကျသလိုပါပဲ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ဖူးယောငျနတေဲ့ မကျြနှာနဲ့ ကှဲနတေဲ့နဖူးက သူ့ကို မကျြရညျဝဲသှားစတေယျ။
ကြောငျးမှာရှိနတေဲ့အခြိနျ ယှနျးခြီဘဝမှာ အကယျြဆုံးပွောဖူးတဲ့အသံပဲ။ တခွားအတနျးသားတှေ လှညျ့ကွညျ့ကွပမေဲ့လညျး ယှနျးခြီဂရုမစိုကျတော့ပါဘူး။ သူ အတနျးထဲကနေ ပွေးထှကျပွီး ဆိုငျကယျထားတဲ့ နရောဆီကို ပွေးသှားလိုကျတယျ။
ခနျ့ဝသေျောက သူ့စကားကို နားထောငျခဲ့ပါတယျ။ သူ ရောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ဆိုငျကယျနားမှာ ရပျစောငျ့နခေဲ့တယျ။ ယှနျးခြီ အရငျဆုံးအမောဖွပွေီးတော့ ခနျ့ဝသေျော နားကို ခွလှေမျးကြဲတှနေဲ့လြှောကျသှားလိုကျတယျ။
သူ့အသံက ငိုတော့မလိုတုနျနတေယျ။ သူ တကယျလညျး ငိုခငျြနတေယျ။ ဘာလုပျရမလဲ။ သူ ဘယျလိုလုပျရမလဲ ခနျ့ဝသေျော ဒဏျရာရလာတယျ။
“ငါ ရနျမဖွဈရငျ သူတို့က မငျးကို ဆှဲထညျ့လိမျ့မယျ…”
ခနျ့ဝသေျောက ခပျတိုးတိုးဖွတေယျ။ ယှနျးခြီမကျြရညျက ပေါကျခနဲ။
ဘယျလိုလုပျရမလဲ ခနျ့ဝသေျောက နာနလေား။ ခနျ့ဝသေျော နာနတောကို သူဘယျလိုလုပျပေးရမလဲ။
ယှနျးခြီထပျအျောတယျ။ နောကျ သူ မကျြရညျတှကေို သုတျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့တယျ။
ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ပွုံးပွီးကွညျ့နခေဲ့တယျ။ ပွီးတော့ ခေါငျးကို ယမျးတယျ။ နောကျတော့…
“ဟငျ့အငျး မငျးငါ့အတှကျ ငိုတာနဲ့ ငါ မနာတော့ဘူး…”
စကားတဈခှနျးအဆုံးမှာ ကောငျလေးတဈယောကျဟာ အငိုတိတျပွီး မကျြနှာရဲသှားခဲ့ပါတယျ။ အခွားတဈယောကျကတော့ ကကြေနြေပျနပျကွီးကွညျ့လို့ပေါ့။
ရနျဖွဈလာတာ သူ နာတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ ကနြေပျတယျ။ ယှနျးခြီကသူ့အတှကျငိုတယျ။ အဲ့ဒါက သူ့ကိုပြျောရှငျစတေယျ။ ဒီလိုမှနျးသိရငျ သူ ပိုပွီးအထိုးခံလာခဲ့ပါတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့စိတျကူးယဉျအတှေးတှကေို ယှနျးခြီကတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ခနျ့ဝသေျော ခဈြလားကို သူ ဆကျမတှေးဖွဈခဲ့ဘူး။ ယှနျးခြီက ခနျ့ဝသေျောကို အဲ့ဒီတဈနမှေ့ာ စိတျပူတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတျသှားခဲ့လိုကျရတယျ။
အပိုင်း - ၇ : မင်းငါ့အတွက်ငိုလို့မနာတော့ဘူး။
ယွန်းချီလွယ်အိတ်ကြိုးလေးကိုတင်းတင်းဆွဲမိတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကိုသူ မတွေ့ရဲရင်တောင် ခန့်ဝေသော်က သူ့ဆီအတင်းရောက်လာတာပဲ။ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကမ်းပေးတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို ယွန်းချီ မျက်လုံးလေးပင့်ပြီး မဝံ့မရဲကြည့်ပြန်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ပုံစံက အရင်အတိုင်း ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ ဒါဆို ညက ခန့်ဝေသော်ပြောလိုက်တဲ့ စကားက အတည်ရောဟုတ်ရဲ့လား။ ယွန်းချီဘာကိုယုံရမလဲမသိတော့ဘူး။ သူ ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ ခန့်ဝေသော်ကမ်းပေးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်လေးကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ သူ့လက်တွေက မတော်တဆ ထိသွားမိသေးတယ်။ ကျစ် သူ မထိမိသွားအောင် သတိထားနေပါတယ်ဆိုကာမှ!
“အင်း… သွား… သွားရအောင်လေ…”
ယွန်းချီမျက်နှာရဲရဲလေးနဲ့ ခန့်ဝေသော်ကိုလှမ်းပြောတယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ ခေါင်းကိုပဲညိတ်ပြီး အရှေ့ဘက်ကို ပြန်လှည့်သွားလေရဲ့။ ဆိုင်ကယ်နောက်ကိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ သူ့လက်ကို ဘယ်မှာထားရမလဲ ယွန်းချီမသိတော့ဘူး။
အရင်တုန်းက… အရင်တုန်းကတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ခါးကို ဖက်ရင်ဖက်၊ အေးတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင် ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ဂျာကင်အိတ်ကပ်ထဲကို သူ့လက်ကိုထည့်ထားတတ်တယ်။ လက်အိတ်ဝတ်ထားတာပဲ သူ အရမ်းကြီးစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။ သူ့လက်ကို ဘယ်နားမှာထားရမလဲဆိုတာကို အကျအနစဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ ခန့်ဝေသော်က ဆိုင်ကယ်ကို စက်နှိုးပြီးဆောင့်ထွက်လိုက်တယ်။ ယွန်းချီရဲ့လက်တွေက အသားကျစွာနဲ့ပဲ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ခါးတွေဆီကို ရောက်သွားတော့တာပေ့ါ။ အကျင့်ဆိုတာကြီးက တစ်ခါခါမှာကြောက်ဖို့သိပ်ကောင်းတယ်လေ။
ယွန်းချီသူ့လက်ကို မရုတ်ဖြစ်ဘူး။ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပဲ သူ ဆက်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ တကယ်လို့ သူ ရုတ်သွားမှ ခန့်ဝေသော်က ဘာလို့လဲမေးရင် သူ့မှာဖြေစရာအဖြေမရှိဘူးလေ။ ဟင့်အင်း ဖြေစရာအဖြေထက် အမှန်ကိုဝန်ခံရရင် စကားမှားသွားမှာကို သူ ကြောက်တာပါ။ ဟုတ်တယ်… ခန့်ဝေသော်ကို စကားတွေမှားဖြေမိမှာကို သူ ကြောက်တယ်။
အရှေ့က ခန့်ဝေသော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကတော့ ကော့ညွှတ်နေခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ယွန်းချီသူ့ကို ဖက်ထားတတ်တာပါပဲ။ အခုကသူ့ကိုပိုနွေးစေပြီးတော့ သူ့စိတ်ကိုပိုပြီး ကြည်လင်စေတယ်။ ဒီခံစားချက်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ခွေးသားပေါက်လေးတစ်ကောင်က နွေးထွေးတဲ့အိပ်ယာထဲမှာ မိခင်နို့သောက်ရင်း နို့ကိုက်ပြီးအိပ်နေရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပဲ။ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းလွန်းလှတယ်။
သူတို့ကျောင်းရောက်ချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းချီကို စကားပြောမလို့ ပြင်တုန်းရှိသေးတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေအရင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ယွန်းချီကတော့ လူဆိုးလေးတွေ အုပ်စုကိုတောင့်သွားတာလည်းမြင်ရော မြေခွေးသိုက်ထဲကနေလွတ်အောင်ပြေးတဲ့ ယုန်လေးတစ်ကောင်လို လုံးနေအောင်ပြေးသွားခဲ့တာပေါ့။
တော်သေးတယ်… အဲ့ဒီကောင်တွေသာ မရောက်လာဘူးဆိုရင် ငါတော့ဒုက္ခပဲ… ခန့်ဝေသော်ကို ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စကားပြောရမှာလဲ။
သူ့မှာ ခန့်ဝေသော်ကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိလည်းမရှိဘူးလေ။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းကောင်တွေကိုပဲ အမုန်းအပြည့်နဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။ သူနဲ့ယွန်းချီရဲ့ သာယာတဲ့ရက်လေးကို ဒီကောင်တွေက ဘာလို့ဖျက်ဆီးရတာလဲ။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းသာမရှိဘူးဆိုရင် သူ ဒီကောင်တွေကို ထိုးကြိတ်ပစ်လိုက်ဦးမယ်။ ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲ သူလုပ်လုပ် လူဆိုးလေးဖြစ်နေပြီးသားပဲဟာ မကောင်းတာလေး လုပ်လိုက်လည်း သူ ထူးပြီးဖြစ်သွားစရာမရှိပါဘူး။ လူဆိုးတွေက လူဆိုးအလုပ်လုပ်တာကို ဘယ်သူက ဘာပြောရဲမှာလဲ။
အမြွှာနှစ်ကောင်က ခေါင်းယမ်းပြတယ်။ အမြွှာတစ်ယောက်ပြောထားတာကို နောက်တစ်ယောက်က ထပ်ဖြည့်ပြောလိုက်သေးတယ်။
သူတို့ရဲ့အကြည့်တွေက ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီရောက်သွားလေရဲ့။ အဲ့ကောင်လေးကတော့ ခေါင်းရောင်းလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုကို မုန်းတီးတဲ့အကြည့်ကြီးတွေနဲ့အရင်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ခန့်ဝေသော်ကိုကြည့်ပြီး…
“ဟိုကောင်ရဲ့ အစ်ကိုက မင်းကို ပြဿနာရှာချင်နေတယ်…”
မိန်းကလေးတွေလိုပဲ ဘာလေညာလေဆိုရင် တန်းသိသလိုပဲ ယောကျာ်းလေးတွေမှာလည်း သူတို့ရဲ့အချိန်းအချက်နဲ့ သူတို့ရှိပုံတော့ရတယ်။ ဟိုကောင်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲဆိုတာ ခန့်ဝေသော် တန်းသိသွားတယ်။ သူ ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့…
“အင်း ငါ သိပြီ…”
“အဲ့ဒါကို မင်း ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ…”
အဲ့ဒီကောင်ရဲ့… အဲ အဲ့ဒီကောင်ဆိုတာ ခန့်ဝေသော်တစ်ခါ အရောင်မကြိုက်လို့ဆိုပြီးထိုးလိုက်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့အစ်ကိုပါ။ အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ အစ်ကိုက ကောင်းကောင်းကန်းကန်းမဟုတ်တဲ့အပြင် ရန်ဖြစ်ရင်လည်း အောက်တန်းကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း ရန်ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းထိုးမယ်ဆိုပြီး အုပ်စုလိုက်ရိုက်တာတို့ လက်နက်တွေသယ်လာတာမျိုးပေါ့။
သြော်! အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိဖူးသေးတယ်။ တစ်ခါက ခန့်ဝေသော် အဲ့လိုကောင်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ဖူးတယ်။ ဓားယူလာတာက တစ်ဖက်သူတွေပါပဲ။ သူတို့အချင်းချင်းထိုးမိကြပြီး ခန့်ဝေသော်က လက်လွန်တယ်လို့ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ခန့်ဝေသော်ဆိုတဲ့ ကြက်မောက်သီးလေးက ဘယ်တော့မှ သူများကို နာကျင်စေမဲ့ လက်နက်ကိုမကိုင်ဆောင်တတ်ပါဘူး။ ဓားနဲ့ခုတ်ဖူးတာဆိုလို့ သေနေတဲ့ကြက်သားတွေကိုပဲ အဒေါ်ကို ဟင်းကူကိုင်ပေးလို့ ခုတ်ဖူးခဲ့တာ။ အဲ့လောက်ထိ ရိုးသားတဲ့ကောင်လေးပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ခန့်ဝေသော်က လက်လွန်တယ်လို့ပဲ သတင်းထွက်ခဲ့တယ်။ တောင်စောင်းပေါ်ကနေ လက်လွန်သမျှတွေကို ပစ်ချတယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်ကလေကဝက လွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းလဲတော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း သိတယ်မဟုတ်လား လူတွေက အမှန်တွေကို သိပ်စိတ်မဝင်စားတတ်ကြဘူးလေ။ သူတို့က နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ သတင်းတွေလောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။
ခန့်ဝေသော်ကတော့ နားထောင်ကောင်းတဲ့ကောလဟလတွေရော၊ နားခါးတဲ့အမှန်သတင်းတွေကိုရော သိပ်တော့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ မကြားချင်ယောင်ပဲဆောင်ထားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကလည်း သူ့ကိုနားအေးစေတဲ့အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လေ။
လွယ်အိတ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့နောက်ပစ်ကိုင်ပြီး အတန်းဘက်ကိုသွားဖို့ ခန့်ဝေသော် ခြေစလှမ်းတယ်။ ယွန်းချီကို တွေ့ချင်လှပြီ။ ယွန်းချီနဲ့သူ စကားတွေပြောစရာရှိတယ်။
“မင်းသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲပစ်ထားရင် သူက ယွန်းချီကိုရန်ရှာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…”
တွေးဆဆနဲ့ပြောတဲ့အမြွှာနှစ်ကောင်ထဲက တစ်ကောင်ရဲ့အသံထွက်လာတာကြောင့် ခန့်ဝေသော်ခြေလှမ်းတွေရပ်သွားတယ်။ အနောက်ကို ပြန်လှည့်ကြတဲ့သူ့အကြည့်တွေထဲမှာ င့ါကိုရန်စနေတာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပါနေလေရဲ့။
စကားစတဲ့အမြွှာကောင်လေးက ပခုံးလေးအသာတွန့်ပြီး ခန့်ဝေသော်ကိုကြည့်တယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ဂျစ်တစ်တစ်နဲ့ ခန့်ဝေသော်ကို ကလိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်ရိပ်တွေရှိနေခဲ့တယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ခန့်ဝေသော်က ဒီအုန်းမုတ်ခွက်လေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်တာပဲ။ ဒါကသိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ သူတို့အုပ်စုထဲမှာ အမြွှာကောင်လေးတွေက ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များတဲ့ကောင်ကလေးတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်လေ။
“အဲ့လိုကောင်တွေက စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာကို မင်းလည်းသိပါတယ်…”
နောက်ထပ်အမြွှာတစ်ယောက်က ထပ်ပြီးလောင်စာထည့်တယ်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့စိတ်ထဲဘာခံစားချက်မှမရှိဘူး။ ရွံမုန်းတယ်၊ ကျေနပ်တယ်၊ ထောက်ခံတယ်၊ အစရှိတဲ့ခံစားချက်တွေ သူတို့ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ခံစားချက်နဲ့နည်းနည်းတူတာလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကြိုက်ကြတာက သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိတော့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိဖူးသေးဘူး။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အမူအရာတွေကို တခြားနားလပိန်းတုံးကောင်တွေသာ မသိရှိမယ်။ သူတို့အမြွှာနှစ်ကောင်က ပါးတာမှလှပ်နေတာမို့ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။
“မင်းအခုတလော အဲ့ဒီအုန်းမှုတ်ခွက်လေးနဲ့ ပေါင်းနေတာကို သူတို့မသိဘဲဘယ်နေပါ့မလဲ…”
ကျန်တဲ့ကောင်တွေက ဘာလို့အဲ့ဒီအုန်းမှုတ်ခွက်က သူတို့ကြားထဲရောက်လာလဲကို မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အဓိကက သူတို့ကို ရန်စလာမဲ့ကောင်ကို ရှင်းထုတ်ရရင်ပြီးရောမို့ အမြွှာနှစ်ကောင်ကို သူတို့လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့နှစ်ကောင်က သူများတွေကို သွေးဆောင်တဲ့နေရာမှာ ထိပ်တန်းပဲလေ။ သူတို့က ရန်ဖြစ်တာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုပြဿနာရှာတဲ့နေရာမှာ သိပ်တော်ကြတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့။
“အင်းလေ… မင်းလည်းသိနေတာပဲ ရန်ဖြစ်ရင် ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်ဆိုပြီး ခွဲခြားမနေဘူး…”
“ကိုယ်အမြင်ကပ်တဲ့ကောင်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို လုပ်လိုက်ရုံပဲ… ဒါဆို အဲ့ကောင်ကို အကြိုက်ရိုက်လို့ရပြီလေ…”
တစ်ယောက်တစ်ပေါက် အတိုင်အဖောက်ညီညီနဲ့ ပြောနေကြတဲ့အမြွှာနှစ်ကောင်ကို အုပ်စုထဲက ကျန်တဲ့ကောင်တွေက နားမလည်စွာကြည့်ကြတယ်။ အားနည်းချက်? ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ရဲ့အားနည်းချက်လား? ဘာလို့လဲ?
ကျောပိုးအိတ်ကြိုးကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ပုံစံအရ သူ့စိတ်တွေယိုင်လာပြီဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ အမြွှာလူဆိုးလေးနှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်စပစ်ပြလိုက်ပြီး ခန့်ဝေသော်ဆီ ပြိုင်တူသွားလိုက်ကြတယ်။ သူတို့ခန့်ဝေသော်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရပ်ပြီး ခန့်ဝေသော် ပခုံးကိုဖက်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့သုံးယောက်ပဲ ကြားနိုင်လောက်တဲ့အထိ အသံကိုနှိမ့်ပြီး…
“ယွန်းချီကို သူတို့ Target ထားနိုင်တယ်လေ…”
တစ်ယောက်ပြောပြီးနောက်မှာ နောက်တစ်ယောက်က ဆက်ပြောလာတယ်။
“ငါတို့ရန်ဖြစ်တုန်းကလည်း အဲ့လိုပဲ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လား…”
အတန်းဘက်ကိုဦးတည်ဖို့လှည့်ထားတဲ့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေက အနောက်ကိုပြန်လှည့်သွားတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဆီကို ခြေလှမ်းကျဲတွေနဲ့လျှောက်သွားတဲ့ ခန့်ဝေသော်ကိုကြည့်ပြီး အမြွှာလူဆိုးလေးနှစ်ကောင်က တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်ရိုက်လိုက်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့အော်သံကို သူတို့ကြားလိုက်ရတယ်။
အမြွှာနှစ်ကောင် ကျေကျေနပ်နပ်ပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး လက်ဝါးချင်းရိုက်လိုက်ကြတယ်။ နောက်တော့ လူဆိုးလေးတစ်အုပ်စုက ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကျောင်းထဲက ထွက်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။
အတန်းထဲမှာတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ အနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ရဲဘူး။ တကယ်လို့ လူဆိုးလေးတစ်ယောက် အတန်းထဲဝင်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို သူ မသိဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ သူ စိတ်ပူတာတွေက ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ အတန်းတက်ခေါင်းလောင်းသာ ထိုးသွားခဲ့တယ်။ ကြက်မောက်သီးလေးတစ်လုံးဟာ အတန်းထဲကို ဝင်မလာခဲ့ဘူး။
နံနက်ခင်းအတန်းချိန်တွေကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အုန်းမုတ်ခွက်လေးတစ်လုံးက အနောက်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ကြက်မောက်သီးလေးတစ်လုံးရဲ့နေရာက လွတ်နေဆဲပါပဲ။ တကယ်ပဲ သူ အတန်းကို မလာခဲ့ဘူး။ နေ့လည်တိုင်းအတူ နေ့လည်စာစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်မရှိတာက ယွန်းချီကို အောင့်သက်သက်ခံစားစေတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း သူ့ကို ခန့်ဝေသော်က မုန်းသွားပြီလားဆိုပြီး သူ တွေးနေမိတယ်။ ဒီအတွေးက သူ့ကို ချောက်နက်နက်ထဲကို တွန်းချလိုက်သလိုပဲ။ ဘယ်မြက်ပင်ကို သူ ဆွဲထားရမှန်းမသိဘူး။
“ယွန်းချီ! ငါတို့နဲ့အတူစားမလား ဟိုကောင်လည်း မလာဘူးဆိုတော့…”
အတန်းထဲက ကောင်မလေးတွေစကားကြောင့် ယွန်းချီ စိတ်ညစ်ချင်ချင်ဖြစ်နေရာကနေ ဖျစ်ညှစ်ပြုံးပြတယ်။ ကောင်မလေးတွေက မျက်လုံးလေးတွေမှေးစင်းကြည့်ကြပြီး သူ့ဆီကို အုံလာကြတာပေါ့။
“မှန်မှန်ပြောစမ်း နင်တို့ တစ်ခုခုဖြစ်ထားကြတယ်မဟုတ်လား…”
မိန်းကလေးပြောတဲ့ တစ်ခုခုဆိုတာ ယွန်းချီမျက်နှာရဲသွားမဲ့ တစ်ခုခုကို ပြောတာပါ။
ဘာလို့ သူ့အငြင်းစကားက ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသမီးတွေက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ ရည်းစားပူမိနေတာလဲ မေးရင် ပြန်ဖြေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတာလဲလို့ ယွန်းချီ မအီမသာတွေးတယ်။
“မသိပါဘူး နင်တို့တွဲနေရင်းနဲ့ ရန်ဖြစ်ကြတယ်ထင်လို့…”
ကောင်မလေးတစ်ယောက် စကားကြောင့် ယွန်းချီမျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ကြည့်တယ်။ သူနဲ့ခန့်ဝေသော်က ဘာဖြစ်တယ်?!
“ဘာလဲ ငါပြောတာ မှားလို့လား…”
ပြောတဲ့ကောင်မလေးက သူ့ရဲ့တခြားသူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေကို ပြန်ကြည့်မေးငေါ့တယ်။ သူမပြောတာက မှားများမှားနေလို့လားပေါ့။
“ငါတို့… မ. မတွဲပါဘူး…”
“အိုး… ဒါဆို သူ နင့်ကို ဖွင့်ပြောထားတာလား…”
ယွန်းချီငြိမ်ကျသွားတယ်။ သူ့ကို ခန့်ဝေသော်က ဖွင့်ပြောလား။ ရုတ်တရက် တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးတွေက သူ့ခေါင်းကို ဆောင့်တက်လာသလို။ အခုချိန်မှာ သူ့ခေါင်းပေါ်ကို ဒယ်အိုးတစ်လုံးတင်ပြီး ကြက်ဥပြုတ်ရင်တောင် ပြုတ်လို့ရလောက်တယ်။ သူ ခေါင်းအတော်ပူထွက်သွားလို့။
ယွန်းချီရဲ့ငြိမ်ကျသွားတဲ့ပုံစံလေးကြောင့် ကောင်မလေးတစ်အုပ်က ခပ်တိုးတိုးရယ်ကြတယ်။ သူတို့က ယွန်းချီကို သမီးရတနာလေးကို ကြည့်နေကြတဲ့ မိဘတွေပုံစံမျိုးနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်လိုက်ကြရင်း…
“အဲ့ တိုက်ကြက်ဖကောင်လေးက မဆိုးပါဘူး…”
သူတို့မြို့မှာရန်ဖြစ်တိုင်း ဘေးလူတွေကို အတင်းဆွဲထည့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်မလေးတွေက ပြောနေကြတာပါ။
“နောက်ပြီး နင်က တအားငြိမ်လွန်းပြီး သူက တအားကို ရန်များလွန်းတယ်…”
ကောင်မလေးတွေက သူတို့ပြောချင်တာတွေအကုန်ပြောပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့မှိုပွင့်လေးလို ဖြစ်နေတဲ့ ယွန်းချီကို ကြည့်ပြီး ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့…
“ဘာအရေးလဲ နင်တို့အချင်းချင်း သဘောကျရင်ပြီးတာပဲဟာ…”
ယွန်းချီဘာပြောရမှန်းမသိဘဲ သူတို့ကိုကြည့်တယ်။ ခန့်ဝေသော်ကို သူ သဘောကျရင် ဒီသူငယ်ချင်းမတွေက သူ့ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲလို့ ယွန်းချီကြောက်တာတော့အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေက သူထင်ထားတာထက် သဘောထားပွင့်လင်းကြပုံရပါတယ်။ သူတို့က ယွန်းချီကို ထောက်ခံကြတယ်။ အာ… ထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ပြောထားတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ယွန်းချီစိတ်ဓာတ်ကျချင်သွားတယ်။ ခန့်ဝေသော်က သူနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင် ယွန်းချီက ယွန်းဆိုတာကို မပြောဘူးလို့ပဲ ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါက သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလား။
ယွန်းချီထပ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျသွားပြန်တယ်။ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ။
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အုန်းမှုတ်ခွက်လေးလုပ်နေရင်းကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက်က အတန်းထဲကို အပြေးအလွှားဝင်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ကျောင်းလေးက အရမ်းကြီးမသေးတာကြောင့် ကိစ္စတစ်ခုခုဆို တစ်ကျောင်းလုံး အသိမြန်ကြတယ်လေ။
“ဟေ့! ဟေ့! ခန့်ဝေသော်တုိ့ အုပ်စု ရန်သွားဖြစ်ပြီး ပြန်လာကြတယ်!”
“သူတို့ စုတ်ပြတ်သတ်ပြီး ပြန်လာတာ!”
အော်ပြောနေတဲ့အသံက ယွန်းချီရဲ့ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကို တင်းကြပ်သွားစေတယ်။ သူ စိုးလည်းရိမ်သွားတယ်။ ရန်ဖြစ်ပြီး ပြန်လာကတည်းက သူတို့နိုင်လို့ပဲနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း သူ စိုးရိမ်သွားတာကိုတော့ ရပ်တန့်လို့မရတာအမှန်ပဲ။ အတန်းပြတင်းပေါက်ကို သူ ပြေးကြည့်တယ်။ အတန်းပြတင်းပေါက်က ဆိုင်ကယ်တွေထားတဲ့ နေရာနဲ့နီးတယ်လေ။ သူ ငုံ့အကြည့် အပေါ်ကို မော့ကြည့်လာတဲ့ ခန့်ဝေသော်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံသွားတော့တာပေါ့။
သူ့နှလုံးသားကို တစ်ယောက်ယောက်က လက်အားအပြည့်နဲ့ဆွဲညှစ်လိုက်သလိုပါပဲ။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ဖူးယောင်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကွဲနေတဲ့နဖူးက သူ့ကို မျက်ရည်ဝဲသွားစေတယ်။
ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန် ယွန်းချီဘဝမှာ အကျယ်ဆုံးပြောဖူးတဲ့အသံပဲ။ တခြားအတန်းသားတွေ လှည့်ကြည့်ကြပေမဲ့လည်း ယွန်းချီဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ သူ အတန်းထဲကနေ ပြေးထွက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ထားတဲ့ နေရာဆီကို ပြေးသွားလိုက်တယ်။
ခန့်ဝေသော်က သူ့စကားကို နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်နားမှာ ရပ်စောင့်နေခဲ့တယ်။ ယွန်းချီ အရင်ဆုံးအမောဖြေပြီးတော့ ခန့်ဝေသော် နားကို ခြေလှမ်းကျဲတွေနဲ့လျှောက်သွားလိုက်တယ်။
သူ့အသံက ငိုတော့မလိုတုန်နေတယ်။ သူ တကယ်လည်း ငိုချင်နေတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခန့်ဝေသော် ဒဏ်ရာရလာတယ်။
“ငါ ရန်မဖြစ်ရင် သူတို့က မင်းကို ဆွဲထည့်လိမ့်မယ်…”
ခန့်ဝေသော်က ခပ်တိုးတိုးဖြေတယ်။ ယွန်းချီမျက်ရည်က ပေါက်ခနဲ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခန့်ဝေသော်က နာနေလား။ ခန့်ဝေသော် နာနေတာကို သူဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ။
ယွန်းချီထပ်အော်တယ်။ နောက် သူ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်တယ်။
ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ပြုံးပြီးကြည့်နေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းကို ယမ်းတယ်။ နောက်တော့…
“ဟင့်အင်း မင်းငါ့အတွက် ငိုတာနဲ့ ငါ မနာတော့ဘူး…”
စကားတစ်ခွန်းအဆုံးမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အငိုတိတ်ပြီး မျက်နှာရဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အခြားတစ်ယောက်ကတော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးကြည့်လို့ပေါ့။
ရန်ဖြစ်လာတာ သူ နာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ကျေနပ်တယ်။ ယွန်းချီကသူ့အတွက်ငိုတယ်။ အဲ့ဒါက သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။ ဒီလိုမှန်းသိရင် သူ ပိုပြီးအထိုးခံလာခဲ့ပါတယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အတွေးတွေကို ယွန်းချီကတော့ မသိခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ခန့်ဝေသော် ချစ်လားကို သူ ဆက်မတွေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ယွန်းချီက ခန့်ဝေသော်ကို အဲ့ဒီတစ်နေ့မှာ စိတ်ပူတာနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားခဲ့လိုက်ရတယ်။
MaskMelon 20.12.2019, 12:35 5
Nyo Lae 16.12.2019, 18:02 5
အရုးလားနင်က ထပ်အထိုးခံချင်နေရအောင် ☹️ ငါ့ ယွန်းလေးကိုငိုရအောင် ဟွန့် ☹️
Yun Ji 16.12.2019, 16:21 4.9